Ahoana ny fifantenana amin'ny fonosam-pikarohana fikarohana?
Amin'izao fotoana izao dia misy mpamatsy fandaharam-potoana bebe kokoa hita manerana ny tany. Ny sasany amin'izy ireo dia manintona mpizarazara amin'ny tranokala amin'ny vidiny lafo vidy, fa ny hafa kosa manome voka-panafody mandaitra. Noho izany dia nanjary raharaha sarotra ny hitadiavana orinasa SEO tsara ho an'ny varotra an-jatony, indrindra raha mbola tsy nampiasainao mihitsy ny tolotra fanatsarana. Koa satria ny SEO dia mety ho samy hafa amin'ny samy hafa, mila mandany fotoana ny mandehandeha mankany amin'ny tolotra maimaim-poana asa isan-karazany manome.
Lasa ampahany manan-danja amin'ny fampiroboroboana momba ny fandraharahana an-tserasera ny fanatsarana ny fikarohana. Na tianao te hanangana tranokala orinasa na orinasa goavam-be ao amin'ny orinasa ianao, mila serivisy SEO ianao raha mamela ny orinasanao an-tserasera ho hita ao amin'ny SERP ary hahasarika ny mpanjifa mety aminao - e sax clearomizer tanks. Ny fampielezan-kevitra fanatontosana fikarohana momba ny fikarohana dia manana fiantraikany mivantana amin'ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola. Na izany aza, mba hananganana tetik'ady SEO mahomby, mila mifidy ny SEO marina ianao. Ity fonosana ity dia tsy tokony hanampy anao fotsiny hanintona ny fifamoivoizana azonao aty amin'ny tranonkalanao, fa mahafeno ireo fepetra takin'ny orinasa. Ny marina dia lazaina, tsy asa mora ny mifidy sehatra SEO mety. Na dia izany aza, betsaka ireo zavatra azonao atao mba ahafahanao miatrika ny paikady tsara indrindra amin'ny tranokala an-tserasera.
Karazana karazana SEO
Ny karazam-bidy nomen'ny SEO maso dia azo zaraina ho karazana fototra anankiroa - standard sy customized.
Ny fonosana SEO amin'ny ankapobeny dia matetika ahitana ny serivisy fototra sy teknikam-pitsaboana SEO, toy ny fikarohana momba ny teny fikarohana, ny soratra amin'ny tranonkala, tranonkala fanorenana tranokala anatiny sy ny fanorenana rohy. Midika izany fa tsy ilaina afa-tsy amin'ny fampiasana teknika fanavaozana tranonkala izay manatsara ny fanatrehanao ny aterineto. Ny pikan-tserasera SEO amin'ny ankapobeny dia manana vidiny sarobidy satria tsy mitaky loharanom-pahefana fanampiny ary azo atao amin'ny mpitsabo SEO iray. Ny endri-tserasera SEO dia manintona ireo tranonkala vao haingana. Ny raharaha voalohany izay tompon'ny tranonkala miatrika ny filaharan'ny paik'ady SEO dia tsy natao hanomezana tolo-kevitra ho an'ny fampielezan-kevitr'izy ireo. Ankoatr'izany, tsy misy fotoana ahafahana manolo ireo serivisy ireo amin'ireo izay ilaina na tsy mandoa azy ireo mihitsy. Raha tsy misy dikany ny mandoa vola tsy misy ilàna azy ho an'ny tranonkalan'ny tranonkalanao, maro ireo mpivarotra an-tserasera no manondro ny fonosana SEO.
Ny fonosana SEO manokana dia manolotra tompona tranonkala miaraka amin'ny tolotra izay natao manokana ho an'ny orinasany. Tsy misy serivisy tsy ilaina ampiasaina. Na eo aza ny vidin'ny fitsaboana manokana dia avo kokoa noho ny ho an'ny serivisy serivisy, dia fanapahan-kevitra hentitra ihany ny hampiasany izany. Satria ity karazana SEO ity dia mifanaraka amin'ny filàna tsy manam-paharoa amin'ny raharaham-barotrao, ny vola fampiasanao dia hajaina amin'ny làlana. Ny fikarakarana fikarohana karazana fikarohana manokana dia matetika ahitana ny fanadihadiana ara-tsakafo, ny fikarohana amin'ny fifaninanana ary ny tetikady fanatsaràna hafa izay afaka manatsara ny fisian'ny fandraisana an-tserasera sy manangana ny tranonkala. Ny serivisy fanatontosana fikarohana an-tserasera dia nitaky ekipa manam-pahaizana manokana, ka izany no nahatonga ny vidiny ho ambony noho ny salan'isa.
Noho izany, rehefa manapa-kevitra ny karoka SEO mila ampiasainao ianao, mila mahazo antoka ianao fa hahazo ny teknika fanavaozana rehetra izay ilaina eo amin'ny sehatry ny fandraharahana an-tsena. Ataovy azo antoka fa ny safidy SEO iray nofidinao dia ahitana ny fanadihadinanao tsenan'ny marika, ny fikarohana fikarohana, ny kalitaon'ny fanokafana, ny fanolorana lahatahiry, ny tranokalan'ny tranokala anatiny, ny fifandraisana, ny metadata fanatsarana, ny fananganana tranokala ary ny famoahana blog.
Inona no ilainao mitady ny SEO?
Ny fividianana fanao mahazatra mifanentana amin'ny filanao dia mila SEO ny fonosana matetika dia fomba mandaitra sy mahomby ny tranokala fanatsarana. Andeha isika hitantara bebe kokoa ny zavatra tokony hikaroka ao anaty fonosana fanamafisana karazana fikarohana mba hahazoana vokatra SEO tsara.
Ny dingana voalohany amin'ny fanentanana fanentanana dia tokony hifantoka amin'ny fanaraha-maso momba ny tranokala, site architecture. Ny fanaraha-maso ara-teknika dia hanampy ireo manam-pahaizana SEO hitady sy hanafoanana ny fahadisoana amin'ny code HTML. Ankoatra izany, ny famerenana tanteraka dia ahitana ny fanadihadiana an-tsokosoko etsy sy eroa mba ahazoana antoka fa tsy misy fahadisoana ara-teknika manasaraka ny tranonkalanao amin'ny Google TOP.
Ny soso-kevitry ny teny fanalahidy dia singa fototra amin'ny SEO, satria izy io no laharana voalohany amin'ny fanentanana fanentanana tranokala. Amin'ny ankapobeny, ny manam-pahaizana manokana momba ny fikarohana momba ny fikarohana dia manome ny mpanjifany amin'ny karazana fikarohana goavam-be izay hikirakira ny SEO. Ny matihanina SEO iray matihanina dia tokony hampiasa ny isan'ireo fitaovana hanamarinana ny maha-zava-dehibe ny teny fanalahidy voafantina ary mandray ny lisitry ny fehezanteny tsara indrindra ahafahana mandanjalanja ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Ny fampielezan-tranonkala fananganana kalitao dia ampahany manan-danja amin'ny fanatsarana rehetra. Ny isan'ireo rohy manan-danja sy kalitao izay manondro ny tranokalanao dia mamaritra ny toerana misy anao sy ny lazanao eo imason'ny fitaovam-pikarohana. Ny orinasa SEO tsara dia tokony hiara-miasa amin'ny loharanom-baovao samihafa sy aterineto amin'ny aterineto mba hanomezana ny mpanjifany ny isan'ny kalitao sy ny lisitry ny backlinks. Ny orinasan-tserasera nomerika iray dia afaka manolotra tolotra fananganana rohy ho toy ny ampahany amin'ny serasera SEO ary manome anao ireto rohy manaraka ireto: teknolojia ara-tsiantifika, fanadihadiana rohy momba ny profil-ny, manolotra loharanon-tranonkala ho an'ireo trandrahina manan-danja sy tomponandraikitra, manoratra bilaogy vahiny famoahana sy famoronana lohahevitra sy lahatsoratra tsy manam-paharoa.
Content marketing dia azo ampidirina ao amin'ny serasera na ordinatera maimaim-poana amin'ny sehatra SEO raha heverin'ny SEO consultant fa ilaina ny fanatsarana ny votoatin'ny tranonkala na tokony hosoratana. Ny famoronana votoaty azo itakiana dia dingana iray mandaitra sy mahasosotra ary izany no mahatonga ity lafiny iray amin'ny fividianana fandefasana vola be loatra.